မြန်မာ့ စီးပွားရေး အလျင်အမြန် တိုးတက်နေဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍတွင် ယှဉ်ပြိုင်မှုကို အားပေးပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းများ ဖန်တီးပေးထားခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သိသာထင်ရှားသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ကာ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမှာ အလျင်အမြန် တိုးတက်နေသည်ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်သည်။ “ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးက အလျင်အမြန်ကို တိုးတက်နေပါတယ်” ဟု နိုဝင်ဘာ.
ရွှေတြိဂံဒေသတွင် လူကြိုက်အများဆုံး မျိုးသုဉ်းလု မျိုးစိတ် ၁၀ မျိုးစာရင်းကို WWF ထုတ်ပြန်
မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် လာအိုနိုင်ငံတို့ ထိစပ်နေပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိသလောက်ဖြစ်နေသည့် ရွှေတြိဂံဒေသတွင် ကျား၊ ဆင်၊ ဝက်ဝံနှင့် သင်းခွေချပ်တို့သည့် ကျယ်ပြန့်စွာ ရောင်းဝယ်ခံရမှု အများဆုံး မျိုးစိတ်များဖြစ်သည်ဟု ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (WWF) က ပြောကြားသည်။
အမြန်လမ်းပေါ်တွင် KFC ဆိုင်ခွဲ ဖွင့်လှစ်မည်
ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-မန္တလေးအမြန်လမ်းပေါ်ရှိ ၇၆ မိုင် ယာဉ်ရပ်နားစခန်းတွင် KFC ဆိုင်ခွဲတစ်ခုကို နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဟု KFC Myanmar က ပြောကြားသည်။ အဆိုပါဆိုင်ခွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၇ ဆိုင်မြောက်အဖြစ် ဖွင့်လှစ်မည့် KFC ဆိုင်ခွဲလည်း ဖြစ်သည်။ “၇၆ မိုင်ရပ်နားစခန်းသည် မိုင်ပေါင်း.
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သူများ စာရင်းသစ်ပြုလုပ်ရန် Burma Campaign UK စီစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်များနှင့် ဆက်နွယ်နေသော ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများကို “အမည်ပျက်စာရင်း” သွင်းခြင်း မဟာဗျူဟာကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ရန် စီစဉ်နေ
ဒရုန်းပျံသန်းမှုဖြင့် သတင်းထောက်များအား ထောင်ဒဏ်နှစ်လစီချ
နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အဦးများကို ဒရုန်းဖြင့် ရိုက်ကူးရန် ပြင်ဆင်နေစဉ် ထိန်းသိမ်းခံထားရသည့် သတင်းထောက်များအား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်၌ ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်ရုံးထုတ်ခဲ့ရာ ထောင်ဒဏ်နှစ်လစီ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းတို့၏ ရှေ့နေကပြောကြားသည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမည်ဟု တရုတ်ပြောကြား
ရပ်နားထားသည့် မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက် ပြုလုပ်သွားမည်ဟု တရုတ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားလိုက်သည်။ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းသည် ”နှစ်ဖက်လုံးက သဘောတူညီထားပြီးဖြစ်သည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စီမံကိန်း” ဖြစ်သည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Hua Sunying က နိုဝင်ဘာ ၇.
အာဆီယံ- အေပက် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် ဗီယက်နမ်သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရောက်ရှိ
ဒါနန်း၊ နိုဝင်ဘာ ၉
မြန်မာ့မြေကို ပြန်ရောက်လာတဲ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များ